यसरी काम गर्दो रहेछ हाम्रो शरीरको मांसपेशीले ! | Ratopati
हामीले शरीरिक अभ्यास गर्‍यो भने मासु ठुलो हुन्छ र राम्रो गरी बढ्छ ।
हड्डीमा टाँसिएर रहेका मांसपेशीहरुकै कारण हाम्रो शरीर चल्न सकेको हो । तर यो कुनै निश्चित मासुहरुले मात्रै नभई मासुहरुको समुहको कारण मात्र चल्न सकेको हो ।
मासुका तन्तुहरुको बलियो बन्धन टेन्डन (Tendon) द्वारा छालामा टाँसिएका मासुले नै हाम्रा हड्डीहरुलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो मासु खाँदिदा र छोटो भएको बेला टेन्डनले हड्डीलाई तान्छ र हामी चल्न सक्छौं । मुटु जस्ता केही महत्वपूर्ण मांशपेशीहरु भने आफै स्वचालित रुपमा चलिरहेका हुन्छन् । धेरै जसो हात र खुट्टाको मासु फर्कन्छ ।
मासुले कसरी काम गर्छ ?
मासुलाई हड्डीमा तन्तुहरुको बलियो बन्धन–टेन्डनले जोडेको हुन्छ । हाम्रो मासुले एउटै काम गर्न सक्छ, त्यो हो– तान्नु । मासुले धकेल्न सक्दैन । त्यसैले मासुले हड्डीलार्ई तानेर मात्रै काम गरिरहेको हुन्छ । यस क्रममा कुनै पनि जोर्नी भएको हड्डीस्र्ला चलाृन कम्तिमा दुईवटा मासुको जरुरत पर्छ । उदाहरणका लागि, हाम्रो मासुले कसरी हातलाई चलाईरहेको हुन्छ भन्ने हरौं ।
हाम्रो तल्लो हात चलाउन पाखुरामा दुइवटा मासु क्रियाशील भएका हुन्छन् । ती दुई मासुलाई वाइसेप्स (Biceps) र ट्रासेप्स (Triceps) भनिन्छ । जब स्नायु नियन्त्रणमा हाम्रो वाइसेप्स खुम्चन्छ, हाम्रो हातमाथितिर तानिन्छ । यस अवस्थामा ट्राइसेप्स खुकुलो हुन्छ । माथि भनिसकिएको छ, मासुले तान्न मात्र सक्छ, ठेल्न सक्दैन । त्यसले अब खुम्चिएको वाइसेप्स आफैं खुकुलो हुन सक्दैन । अब अब हात तल झार्नको लागि हाम्रो पाखुराको ट्राइसेप्स मासु खम्चिनै पर्छ । त्यसरी ट्राइसेप्स खुम्चिएपछि बाइसेप्स मासु खुकुलो हुन्छ । र हाम्रो हात तल जान्छ ।
Title Photo: https://www.researchgate.net